मुलुकमा फेरि बन्दाबन्दी हुन्नः स्वास्थ्य मन्त्रालय : मुलुकमा फेरि बन्दाबन्दी हुन्नः स्वास्थ्य मन्त्रालय :
मुलुकमा फेरि बन्दाबन्दी हुन्नः स्वास्थ्य मन्त्रालय
१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार २१:०९ । काठमाडाैं
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय सङ्क्रमित भए पनि बन्दाबन्दी नगरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाउँदै बन्दाबन्दी गर्ने योजना नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालका अध्यक्षतामा यही असोज ७ गते बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले २५ हजार सक्रिय सङ्क्रमित पुगेमा सरकार मातहत रहेका अस्पतालले उपचारको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जनाउँदै सरकारलाई बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘मुलुकमा फेरि पनि बन्दाबन्दी गर्ने योजना रहेको छैन’, डा. गौतमले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि सरकार संरचनाले थेग्न नसक्ने भनेको हो । तैपनि हामी निजी स्वास्थ्य संस्थासंँगको सहकार्यमा सङ्क्रमितको उपचार गर्छौं ।’
उहाँका अनुसार सक्रिय २५ हजार सङ्क्रमित भएका खण्डमा पाँच हजार लक्षण भएका सङ्क्रमित रहने छन् । तिनलाई आवश्यक शय्या सरकारसंँग छ । अहिले ८२ हजार ४५० सङ्क्रमितमध्ये २१ हजार २३४ सक्रिय सङ्क्रमित छन् । यस्तै ६० हजार ६९६ जना निको भएका र ५२० जनाको सङ्क्रमणको कारणले निधन भएको छ । अहिले दुई हजार ६०० सघन उपचार कक्ष, ९०० भेन्टिलेटर र २० हजार ७६५ आइसोलेसन शय्या छन् ।
आजै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका प्रतिनिधिसँग भेटी बन्दाबन्दी तत्काल नहुने जनाउँदै हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गरेका छन् ।